Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba-Worn | Izixazululo ze-OMG
Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele
The Ukukhetha okubanzi kwamakhamera atholakalayo emakethe kungenza ukukhetha okukodwa kube okumangalisa. Ikhasimende kufanele liqale lazi ukuthi yiziphi izidingo zazo. Isibonelo, udinga amahora amangaki okuqoshwa? Bafuna ukugqoka kanjani ikhamera (okusho, isigqoko noma ihlombe noma isifuba kuphela), ingabe badinga ukusakazwa bukhoma noma ukuqoshwa kuphela, uhlelo olilingana nosayizi olulodwa luhambisana nohlelo olusebenzayo oluvumela ukwenziwa ngokwezifiso (isib. Xhuma amakhamera angaphandle), izici zokuphepha ezifana nokubethela noma amazinga ahlukile wokugunyazwa, yiluphi uhlelo lwe-VMS okufanele lusetshenziswe, njll.
Iningi Amakhamera eza nokuqoshwa kwangaphambi komcimbi bese eqala ukurekhoda ngemuva kokuthi umsebenzisi ecindezele inkinobho. Ezinye izinto ezisabalele ama-tagging amavidiyo (ukunika amandla ukubuyisa ngokushesha), kusiza ukubukwa kokuqoshwa kwevidiyo kwamanye amadivaysi (isib. Imoto yamaphoyisa, isikhungo samiyalo, ithebhulethi, njll.). Okunye ukunikezwa ukusakaza ividiyo nge-3G / 4G ukwengeza ekuqwashiseni ngesimo esisezingeni lomyalo nolawulo. Sikholwa ukuthi ikusasa kulo mkhakha lixubekile ngokuqoshwa nokusakazwa bukhoma.
Kusukela ukuqoshwa kwevidiyo yekhamera yomzimba kungasetjenziswa njengobufakazi ngesikhathi sokuqulwa kwecala enkantolo, izinkampani kufanele ziqinisekise ukuthi imikhiqizo yazo ilandela isethi ehlukile yemithetho ephathelene nokugcinwa kokwethenjwa kobufakazi bedijithali. Kunezici eziningi ezijwayelekile zokuqinisekisa ubuqotho bedatha. Amazinga okuvumela okuhlukile aqinisekisa ukuthi iphoyisa eligqoke ikhamera alinayo indlela yokuphazamisa ividiyo, liyisuse, noma ilishintshe.
In I-Zepcam ngokwesibonelo, sinamazinga amathathu okugunyazwa: ileveli yomsebenzisi (ivumela ukuqoshwa nokusakazwa bukhoma kuphela, kepha akukho ukususwa kwefayela noma ukungena kwamafayela aqoshiwe), i-superuser (evumela ukuqoshwa nokusakazwa bukhoma, kanye namandla okususa amafayela nokufinyelela , amafayela aqoshiwe), nezinga lomlawuli, elinamathisela amalungelo okuphathwa kohlelo ngaphezulu kwezinga lomsebenzisi ophakeme.
Vula kuveza ukubethelwa kwamavidiyo njengoba elayishwe ohlelweni lokuphatha ividiyo. Amafayela angabukwa kuphela kumakhompiyutha agunyaziwe futhi abasebenzisi kuphela banephasiwedi efanelekile yokuvula ukubethela. Uhlelo ligcina ilogi yokubandakanya yokubandakanya yezenzo zonke nezenzo ezenziwa kumafayili ohlelweni ukusuka endaweni lapho lalayishwa khona nangesikhathi sokuphila kwayo. Indawo yokucwaningwa kwamabhuku iqopha isikhathi / usuku lwesenzo, umsebenzisi owenze lokho, ikhompyutha lapho isenzo senziwa khona, kanye nencazelo yesenzo uqobo. Isici esingeziwe sinikeza amandla okufihla amafayela, angasetshenziswa lapho kulungiswe izinto ezibonakalayo ezilayishiwe. Amafayela afihliwe angabukwa kuphela ngamazinga abasebenzisi njengoba achazwa ngumlawuli. Lokhu kusiza ekuqhubekeni nokuvikela imininingwane ngisho emnyangweni wamaphoyisa.
Ividiyo ukurekhoda kugcinwa njalo kudivayisi bese kulayishwa kusuka esiteshini sedokodo engxenyeni yokugcina yoshintsho - esiteshini sedokodo futhi sishaja ikhamera ngokushintsha okulandelayo. Kumamodeli amaningi womenzi, abasebenzisi bokugcina bangakhetha phakathi kwesitoreji sendawo nesitoreji samafu. Naphezu kokutholakala kokukhethwa, ababesixoxisana nabo bavumile ukuthi iningi labaphethe abomthetho libuhlungu ngokubeka isixazululo sabo efwini. Iningi lamakhasimende ethu lisebenzisa kakhulu isitoreji sendawo. Inzuzo yesitoreji samafu ukuthi amafayela ayatholakala kusuka kunoma iyiphi indawo nge-Intanethi; noma kunjalo, lokhu kungabhekwa njengokulimaza ngokungabaluleki kokuphepha kwedatha.
Abanye amazwe awakhululekile lapho idatha yawo ibanjelwa ezikhungweni zedatha engasogwini futhi inenqubomgomo eqondile engakuvumeli lokhu. Kukhona ukungabaza ukuthi isitoreji sendawo singadinga ukunakwa kakhulu nokulondolozwa kunamafu lapho kukhiqizwa amanani amakhulu emininingwane yevidiyo.
I-Vizucop's UBarnes wengeze ukukhathazeka okwengeziwe: kwenzekani kwimininingwane ngemuva kokuphela kwenkontileka yokuqala? Ake sithi unenkontileka yeminyaka emithathu futhi ukwazile ukuthola umhlinzeki oshibhile lapho kuphela. Ngabe izinhlangano ezizisebenzelayo zizokwazi ukuhambisa imininingwane yazo egciniwe?
I-mkali ekhuphuka intshisekelo yamakhamera womzimba kanye nezimali ezitholakalayo zilethe amamodeli amaningi emakethe. Abathengi kufanele bazi futhi baqiniseke ukuthi bathenga kubakhiqizi ababhekwa kakhulu abanganikeza ukwesekwa okufanele.
Wena isidingo sokubona ukuqina kwekhamera, ingabe inkampani isungulwe kahle noma ivela kothile owathola umthombo oshibhile ezweni langaphandle lapho kungekho khona ukwesekwa. Ukuhlinzekelwa kwamakhasimende kukhulu kulo mkhakha, abenzeli bomthetho badinga izikhathi zokuphendula okusheshayo. Ngakho-ke abathengisi bekhamera eshibhile bazonyakaziswa, izindleko zenkonzo yokuthengisa ngemuva ziyosusa abadlali abancane.
Ini kufanele usondele engqondweni lapho uthola Ikhamera Yomzimba Ozelwe? Ama-ejensi kufanele athathe konke kusuka kudivayisi kuya kuzinhlelo zokusebenza zeselula nayo yonke inqubo kusuka ekubanjweni kuya enkantolo kufaka ukuqoshwa kwesithombe esibalulekile, imininingwane yokwemukela njengamapuleti welayisensi nobuso, ukwabelana nokuphatha leli cala, kanye nokunikeza ukuqoshwa kwevidiyo enkantolo. Sigqugquzela amaklayenti ukuthi acabangele ikhwalithi hhayi kuphela yekhamera egqoke umzimba uqobo kodwa nohlelo lokuphatha ubufakazi oluzofaka idatha eyiqoqayo.
Abaningi abezimo eziphuthumayo manje sebesendleleni yabo yesithathu noma yesine yokuthenga Amakhamera Worn Worn. Yini okufanele ifike? Siphakamisa ukuthi abathengi kufanele bazibuze:
Ngabe Amakhamera Worn Womzimba alungele ukufunwa?
Sikuguqula kanjani konke ukuqoshwa kwevidiyo okuqoqwe ohlelweni lokulondolozwa?
Singawavuselela kanjani lawa madivaysi futhi ingabe kukhona okunye ukulungiswa okudingekayo?
Singayisebenzisa kanjani ngempumelelo le datha: endaweni noma efwini?
Malini ikhambi ngalinye? Ngabe yiziphi izinzuzo nezinzuzo?
Ibiza malini i-Camera Worn Camera?
Yini iwaranti ezihlobene nokungasebenzi kahle / ukwephulwa?
A indlela ehlakaniphile yokuthengwa kwempahla incane kakhulu kubathengisi abathathu abalimela ibhizinisi lakho, ukwahlukanisa izingxenye ezintathu eziphambili zesisombululo samakhamera we-Body-Worn Camera: idivaysi yekhamera (ikhwalithi yenzalo, ukusebenza, impilo yebhethri, amandla, iwaranti yokubuyiselwa, ukushaja) Isixazululo sokugcina (Ngabe ufuna ukulondolozwa kwasendaweni noma ngamafu? Ufuna kanjani ukuqoshwa kwevidiyo ethile? Bangaki abantu abangafika ku-video? Ngabe kuyahlangabezana nezindinganiso zokwahlulela zokulawulwa kobufakazi? Luyini uhlelo lwakho lokuphuma uma ufuna ukushintsha abahlinzeki ?) Bese kuthi amantongomane nokusongelwa kwezinye izindlela zamanani entengo (kuthengwe ngenkani, noma isivumelwano sanyanga zonke? Ngabe izindleko zehadiwe zifakiwe nesixazululo sesitoreji?).
I-van der Aa ye-Zepcam iphakamisa ukusebenzisa isixazululo sefu ukuze ungabi nazinkinga zokusungula i-IT enhlanganweni yakho - bese uthola ukuthi lapho kukhona izinzuzo zangempela enhlanganweni yakho. Ngakho-ke, kufanele uqale ukuthuthukisa uhlelo lokukhulisa imali.
Wena angase futhi adinge ukusondela kusengaphambili, uphakamisa. Ingabe umthengisi wakho ukubonisa indawo esizayo-ubufakazi? Ingabe ingabamba amakhamera amaningi? Ingabe ilungiselelwe ukwenziwa kabusha kwevidiyo noma ukuhlaziya? Ingafakwa ihlanganiswe kwezinye izinhlelo? Kubalulekile ukuba nesiteji esinobuciko, uveza.
Futhi thola umuntu ongamethemba. Amanothi wePinnacle's Whitley: Njengoba Amakhamera we-Body Worn asemukeleke kabanzi, kunekugcwala kwemikhiqizo eshibhile. Uma ubona umkhiqizo unama-specs, iqiniso liwukuthi cishe ngeke likwenze lokho.
Amaphuzu ambalwa ayisisekelo okufanele uwagcine engqondweni yakho, uzama ukuthola ini ngamakhamera agqokwa ngumzimba? Iningi lamakhasimende alithathi lelo ngaphambi kokuqala inqubo. Khuluma namakhasimende asebenzisa umkhiqizo futhi angangeni kulokhu okungaboni.
Ukucabanga ukuthi yini okufanele ongayenza kanye nokungafanele ukwenze ukuthenga Amakhamera agqokwa ngomzimba.
Bheka ukucabanga okuphelele kokuqinisekisa nedatha ozobe uyiqoqa - uzodinga uhlelo olungaluphatha futhi uqinisekise ukuthi uchungechunge lobufakazi luyagcinwa.
Ingayiphatha futhi iqinisekise ukuthi uchungechunge lobufakazi luyagcinwa.
Bheka amakhamera weWorn Worn okwamanje uma ungekho emkhakheni wezokuphepha womphakathi - uma abasebenzi bakho kaningi besimweni lapho kuyizwi lomunye kuphambana nelinye, bangakusekela ukukhokha izikweletu zomthetho kanye nokunqanda ukuziphatha okubi.
Ukufeza ucwaningo lokushayela izindiza ukuthola ukuzwela okuhle kanye nomsebenzi odingekayo wokuhambisa amakhamera we-Body-Worn Camera kuyo yonke inhlangano yakho.
Ungakhohlwa ukucabanga ngekusasa-cabanga ukuthi izidingo zakho zingashintsha kanjani nokuthi uhlelo olucubangayo luzophakeme ngokwanele yini ukuluxhasa.
Musa ukusayina kulayini onamachashazi ngaphandle kokucabanga ukuthi uzokhiyelwa kumthengisi oqondile.
At Ukuphela kwengxoxo yethu, sinikeza umbono ovela kuMichael Barky oyiBambela oMphathelene namaphoyisa eToronto. Ubuye aphakamise ukuthi ekukhetheni ikhamera egqokwa ngumzimba elungele indawo okuhlala kuyo, kufanele uthathe kuqala ukuthi uzosetshenziselaphi umshini. Lapho usuthathe isinqumo ngesizathu sedivayisi endaweni yakho, udinga ukuhlangana nalezo zikhulu endaweni yamalungelo abantu, ubumfihlo, nenkululeko yolwazi, izinyunyana ezifanele, kanye nabameli bashushisi. Lezi zidlali ezibalulekile zizokwazisa umsebenzi wakho, futhi zikuqondise kusisombululo esifanele, ngokunikeza okusondele kokukhathazeka kwabo nezidingo zabo.
Iqembu lakho kufanele libe selinquma ukuthi yiziphi izidingo eziphoqayo okholelwa ukuthi unazo kwezobuchwepheshe, kufaka phakathi ikhamera, isoftware, izinqubo zokuvuma izono kanye nesitoreji. Ngemuva kwalokho, futhi kuphela lapho, uzobekwa kahle ukuthola ukuthi sikhona yini isixazululo esivumelekile sezidingo zakho, ngentengo engabizi.
Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3438 Ukubuka kwe-2 Namuhla